ပါရီ ရာသီဥတုဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်ထဲ အမေရိကန်ပြန်လည် ဝင်ရောက်လာမှာကို ကြိုဆို လိုက်တဲ့ Audi ! – MyMedia Myanmar
ပါရီ ရာသီဥတုဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်ထဲ အမေရိကန်ပြန်လည် ဝင်ရောက်လာမှာကို ကြိုဆို လိုက်တဲ့ Audi !
2021 ခုနှစ် အစပိုင်းကလည်း အရာရာတိုင်း အတွက် ‌အပြောင်းအလဲ တွေနဲ့ လှုပ်လှုပ်ခတ်ခတ်ရှိလှပြီး ဒီအထဲမှာမှ ပါရီ ရာသီဥတုဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်ထဲ အမေရိကန် ပြန်လည် ဝင်ရောက် လာတော့မယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်းက တော့ အများစု ကို ပြန်လည် စိတ်ဓာတ် တက်လာစေခဲ့ပါတယ်။ ကားထုတ်လုပ်ရေးပိုင်းမှာ ဆိုရင်လည်း လုပ်ငန်းတွေ အများအပြားဟာ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ လိုက်လျော ညီထွေ ဖြစ်မယ့် နည်းပညာတွေ ဘက်ကိုတစ်ပြိုင်တည်း ရွေ့လျားဖို့ ပြင်ဆင် နေကြတာ ဖြစ်ပြီး အခု သတင်းကတော့ ပိုပြီး သန့်ရှင်း ကောင်းမွန်တဲ့ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနဲ့ ပို့ဆောင် ဆက်သွယ် ရေး ကဏ္ဍ တွေ အတွက်‌ကတော့ တကယ်ကို စိတ်အားတက် ဖွယ်ရာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နာမည်ကြီး Audi ကား ကုမ္ပဏီ ကလည်း အခု သတင်းကို ကြိုဆိုတဲ့ အနေနဲ့ Social Media အပေါ်မှာ All-New e-Tron GT ကို ကြော်ငြာရင်း ထူးခြားတဲ့ ခေါင်းစီး တစ်ခု နဲ့ ဖော်ပြခဲ့တာ ပါ။ “အခုကား အသစ်ကတော့ ရှေ့ဆက် ဖို့ အတွက် အနုပညာမြောက် ခြေလှမ်းတစ်ရပ် ဖြစ်ပြီး ပါရီသဘောတူညီချက်စာချုပ် ကို အမှီပြု ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ All-New e-Tron GT ဟာ လည်း အားလုံးအတွက် စံသတ်မှတ်ချက် ကား တစ်စီး ဖြစ်လာမှာပါ” လို့ ခေါင်းစီး ဖော်ပြကာ တင်ဆက် ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုလိုမျိုး လျှပ်စစ် စွမ်းအင် သုံးစွဲတဲ့ အရွေ့ တစ်ခု ကို လျှောက်လှမ်းရာမှာ Audi ကလည်း အစဦး ဆုံး ကုမ္ပဏီ တွေ ထဲကတစ်ခု ဖြစ်ပြီး အချို့ကျပြန်တော့လည်း အခုလို လှုပ်ရှားမှုတွေကို နိုင်ငံရေး အရအရွေ့ တစ်ခုကို ဦးတည် တယ် လို့လည်း ယူဆနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ Tara Rush နဲ့ မကြာသေးမီ ကမှ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာတော့ Audi America ရဲ့ CMO ဖြစ်သူက သတင်းထောက်တွေကို ပြောကြားရာမှာ ကုမ္ပဏီဟာ ရာသီဥတုဆိုင်ရာ သဘော တူညီချက်နဲ့ ပက်သက်လို့ အမြဲတမ်း လိုက်နာဖို့ ကြိုးပမ်းနေပါတယ်လို့ ဖော်ပြခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ၎င်းက အခုလို အပြောင်းအလဲ တွေ ကို လက်ခံ ကြိုဆိုတာဟာ သူတို့ ကုမ္ပဏီ ရဲ့လာမယ့် ၂၀၅၀ ခုနှစ် အမှီ ကာဗွန် ထုတ် လုပ်မှု မရှိ ဖို့ အတွက် စီမံထားခြင်း ရဲ့ တစ်စိတ် တစ်ပိုင်းလည်း ဖြစ် ကြောင်း၊ လာမယ့် ၂၀၂၅ အမှီ အမေရိက ‌ဈေး ကွက် ထဲမှာ လျှပ်စစ် ကားတွေကို ၃၀ % လောက် အထိ ရောင်းချ ဖို့ အတွက် ကြံရွယ် နေခြင်းလည်း ဖြစ်ကြောင်း ဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါတင် မကသေးပဲ Audi ကုမ္ပဏီ တစ်ရပ်လုံးဟာ လျှပ်စစ် ကား ဈေးကွက်ရဲ့ ခေတ်သစ် တစ်ခု အတွက် အတော်လေးကို စိတ်အားထက်သန် နေကြတာ ဖြစ်တယ်လို့လည်း အခိုင် အမာ ပြောကြားသွားခဲ့တာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးမီက လည်းအမေရိက သမ္မတ သစ် ဂျိုးဘိုင်ဒန် တက်ရောက်လာခဲ့ခြင်း အပေါ်မှာ ကြိုဆိုတဲ့ အနေနဲ့ Audi ဟာ Social Media ပေါ်မှာ ကြေညာချက် တစ်ခု ထုတ်ပြန်ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ ကြေညာချက် ထဲမှာ တော့ ရာသီ ဥ‌တု ပြောင်းလဲမှု ဆိုင်ရာ အနေအထားတွေ အတွက် တစ်ဖန်ပြန်လည် ရင်ဆိုင် ဖြေရှင်းဖို့ ရှိလာခဲ့တဲ့ အမေရိက အတွက်ကိုဂုဏ်ယူ အောင်ပွဲ ခံ ပါတယ်လို့လည်း ပါဝင်ထားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခြားသော နာမည်ကြီး ကား ကုမ္ပဏီ တွေ ဖြစ်ကြတဲ့ BMW နဲ့ Mercedes Benz တို့ ဟာ ဆိုရင်လည်း သိပ္ပံ ပညာ ရပ်ဆိုင်ရာ ကာဗွန်ထုတ်လုပ်မှု အပိုင်းနဲ့ ပက်သက်တဲ့ လျှော့ချရေး ရည်မှန်းချက်တွေ ကို တစ်ဆင့် ခြင်း ရောက်ရှိလာ ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပြီး အခြားသော Ford နဲ့ Honda တို့လို Brand တွေကလည်း ကယ်လီဖိုးနီးယား ပြည်နယ် နဲ့ သဘောတူ ပူးပေါင်း ကာ ကာဗွန် ထုတ်လုပ်မှုကို လာမယ့် ၂၀၂၆ အမှီ သိသိသာသာ လျှော့ချ နိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေကြပြီလည်း ဖြစ်ပါ တယ်။ အခုလို လှုပ်ရှားမှု တွေရဲ့ အစပြုရာ ကတော့ ကမ္ဘာ အရပ်ရပ် က အချို့ သော ဈေးကွက် တွေထဲမှာ သာမန် Gas စွမ်းအင် သုံး ကားတွေရဲ့ ဈေးကွက် ဝေစုတွေကို လျှပ်စစ် ကားတွေက ယူဆောင် လာနိုင်လို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Audi အနေနဲ့ကတော့ လျှပ်စစ် ကား ဈေးကွက် အတွင်းက သူတို့ရဲ့ လှုပ်ရှားမှု ‌ခြေလှမ်းတွေကို တိုးတက် ‌လာအောင် သိသိသာသာ တွန်းအား ပေးလာ နေတာ ဖြစ်ပြီး မကြာသေးမီကပဲ တရုတ် နိုင်ငံ အတွင်း လျှပ်စစ် ကားဈေးကွက် ကိုလွှမ်းမိုးနိုင်ဖို့ အတွက် အစီအစဉ် အသစ်တစ်ခု ကိုလည်း ထုတ်ဖော် ပြောကြားထားခဲ့ပြီး ပြီ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
The post ပါရီ ရာသီဥတုဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်ထဲ အမေရိကန်ပြန်လည် ဝင်ရောက်လာမှာကို ကြိုဆို လိုက်တဲ့ Audi ! appeared first on MyCars Myanmar.
MyMedia Myanmar2021-01-24T16:00:38+06:30January 24th, 2021|MYCARS MYANMAR|